warbixintii ugu danbeysay COVID19 Soomaaliya – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA warbixintii ugu danbeysay COVID19 Soomaaliya
20 May 2020, Wasiirka Caafimadka ayaa la wadaagtay bulshada xaaladaha ka soo kordhay COVID-19, iyadoo xaqiijisay 71 xaladood. Waxaa laga soo xaqiijiyay 4 maamul goboleed oo kala ah Jubbaland 46 xaaladod, Gobolka Banaadir 17 xaaladood, Puntland 6 xaaladood iyo Somaliland 2 xaaladood.
Wadarta guud ee xaaladaha cusub ayaa noqoneyso 1,573 xaaladood, waxaana geeriyooday 2 bukaan halka ay bogsootay 10 bukaan.
Wasiirka ayaa bulshada u sheegay in ay muhiim tahay inaan ku dadaalno ka hortagga cudurkaan aana xakameen karno hadaan umidowno la dagaalankiisa. Sidoo kale bulshada waxaa looga baahanyahay ina ay dhageystaan fariimaha wacyigelineed ay bixiyaan dhaqaatiirta si ay uyaraato faafidda caabuqa.
warbixinta oo kooban waa tan
20 May 2020: Warbixinta COVID-19 ee Soomaaliya.
> Laga Helay: 71
> Jubbaland: 46
> Somaliland: 2
> Lab: 52
> Dhedig: 19
> Bogsasho: 10
Previous articleWarbixnta maanta COVID19 somaliland
Next articlewarbixintii ugu danbeysay itoobiya COVID19
Xaaladaha ugu danbeysay COVID-19 Somaliland .
Taliyihii Milliteriga Ethiopia Oo La Toogtay Iyo Afgembi Dhici Lahaa Oo...